फैसलाको घडी नजिकिदै, को होला वर्षका उत्कृष्ट प्रशिक्षक ? | Hamro Khelkud
फैसलाको घडी नजिकिदै, को होला वर्षका उत्कृष्ट प्रशिक्षक ?
काठमाडौं ( हाम्रो खेलकुद) – खेलाडीको हरेक सफलताको पछाडि प्रशिक्षकको हात रहन्छ । त्यसैले प्रशिक्षकको बेग्लै खालको सम्मान पनि हुने गर्दछ । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको आयोजनामा दुई दिन पछि हुने पल्सर स्पोर्टस अवार्डमा तीनै प्रशिक्षकहरुका लागि एउटा अलग्गै विधामा समावेश गरिएको छ ।
माथि बाँयाबाट :किरण थापा,मेघराज केसी र पुष्पराज ओझा , तल बाँयाबाट: ग्योतोकु कोजी, जगत टमाटा
यसपटक वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक विधामा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक ग्योतोकु कोजी र थ्रीस्टार क्लबका मेघराज केसी, एथलेटिक्सका पुष्पराज ओझा, क्रिकेटका जगत टमाटा र ब्याडमिन्टनका किरण थापाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यसपटक उत्कृष्ट बन्ने प्रशिक्षकले मोटरसाइकल पनि प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष, महिला र पिपुल्स च्वाइस अवार्डका विजेतालाई पल्सर मोटरसाइकल पुरस्कार दिइएको थियो ।
जापानी कोजीले नेपाललाई एएफसी सोलिडारिटी कप उपाधि दिलाएका थिए । गत वर्ष मलेसियाको कुचिङमा भएको फाइनलमा मकाउलाई १–० ले हराएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फुटलबमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हात पारेको थियो । त्यही उपलब्धिको आधारमा नेपालले फेरि एसियन कप २०१९ को छनोट खेल्ने अवसर पनि पायो । कोजीको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले २०७३ सालमा ६ खेलमा ३ जित, २ बराबरी र १ मा हार बेहोरेको थियो ।
गत बर्ष नेपाली ब्याडमिन्टनका लागि सुखद रह्यो । त्यसको एउटा मुख्य हिस्सा प्रशिक्षक थापा हुन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हात पारेको थियो । उक्त सफलता नङ्सल तामाङ र रत्नजित तामाङले पाकिस्तान इन्टरनेसनल सिरिजको मिक्स डबल्समा दिलाएका थिए । तामाङ दिदी–भाइले ४ खेल जित्दै स्वर्ण हात पारेका थिए । उक्त प्रतियोगितामा नङ्सलले वुमेन्स सिंगल्समा पनि कांस्यपदक जितेकी थिइन् । त्यो टोलीको मुख्य प्रशिक्षक थापा थिए ।
रियो ओलम्पिकमा सरस्वती भट्टराई र हरिकुमार रिमालका प्रशिक्षक हुन्, पुष्पराज ओझा । उनका चेली सरस्वतीले रियोमा १५ सय मिटरमा २६ वर्ष पुरानो राष्ट्रिय कीर्तिमान तोडेकी थिइन् । ओझाले सम्हालेको त्रिभुवन आर्मी क्लबले सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको एथलेटिक्समा सर्वाधिक २२ स्वर्ण, १६ रजत र ८ कांस्यपदक पनि जितेको थियो ।
अर्का फुटबल प्रशिक्षक मेघराज केसीले थ्रीस्टारलाई गत वर्ष दुई प्रतियोगितामा सफलता दिलाएका थिए । एएफसी कपको प्रारम्भिक छनोटमा मंगोलिया र कम्बोडियाली लिग च्याम्पियनलाई पन्छाउँदै थ्रीस्टार शीर्षस्थनमा रहेर अन्तिम प्ले–अफमा छनोट भएको थियो । उनकै नेतृत्वमा थ्रीस्टारले फाइनलमा इस्ट बेंगाललाई अतिरिक्त समयमा २–१ ले पराजित गर्दै गुवहाटीमा भएको ६४ औं बोर्दोलोई ट्रफिको उपाधि जितेको थियो ।
टामाटा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हुन् । उनले गत वर्ष विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई ६ खेलमध्ये ४ खेल जिताएका थिए । त्यसक्रममा नेपाल शीर्षस्थानको नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गर्ने एक्लो टिम बन्यो । नेपालले च्याम्पियनसिपमा नामिबियाविरुद्ध २ र केन्यासँग १ खेल पनि जितेको थियो । त्यस्तै, इमर्जिङ टिम्स कपमा हङकङलाई पनि हराएको थियो ।